Puntland oo isu diyaarisay maanta Caleema-saarka Deni iyo Karaash – Kalfadhi
Sida uu ahaa qorshaha Dowlad Goboleedka Puntland, waxaa maanta magaalada Garoowe lagu caleema-saarayaa Madaxweynaha Puntland ee cusub, Saciid Deni iyo Kuxigeenkiisa Axmed Karaash. Sida ay dadka deegaanka u sheegeen Kalfadhi, waxaa saaka jawiga Garoowe uu ka duwan yahay sidii uu ahaan jiray, oo waxaa aad loo adkeeyey ammaanka magaalada oo dhan.
Ciidaanka Dowladda ayaa meel kasta taagan, gaar ahaan nawaaxiga Madaxtooyada Puntland iyo goobaha ay degan yihiin madaxda iyo masuuliyiinta doraad ilaa shalay kusii qulqulayey Garoowe. Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa la filayaa inuu maanta gaaro Garoowe, si uu uga qeyb-galo Caleema-saarka Madaxweyne Deni iyo Kuxigeenkiisa Karaash.
Garoowe waxay maanta la ciir-ciireysaa marti u badan siyaasiyiin, oo isugu jirta madaxda ugu sarsareysa hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), mucaarad iyo kuwa kale. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Saciid Deni, ayaa dhamaantood inta badan kusoo dhaweeyey Garoowe, kaas oo qaarkood la qaatay kulamo gaar ah.
Waxa ugu xiisaha badan ee ay dad badan ka filayaan halkaas ayaa ah sida ay u dhici doonto qudbadaha siyaasiyiinta isugu tagtay Garoowe, gaar ahaan meelaha ay ku eegi doonaan iyo sida ay fekerkooda siyaasiga ah ugu cabiri doonaan qudbadahooda.
Madaxda iyo masuuliyiinta ay dad badan maanka ku hayaan sida ay munaasabaddaas uga hadli doonaan waxaa ka mid ah Madaxweynaha DFS, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynayaashii hore ee DFS, Xasan Sh. Maxamuud iyo Shariif Sh. Axmed, iyo Hogaaamiyaha Mucaaradka ah ee Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Hase ahaatee, Wasaaradda Warfaafinta Puntland ayaa war ay shalay soo saartay ku sheegtay inaan munaasabaddaas laga ogolaan doonin hadalada xanafta leh ee ay suurtagalka tahay iney siyaasiyiinta qaar uga faa’iideysan doonaan danahooda siyaasadeed, sida uu hadalka u dhigay Wasiirka sii haya xilka Wasaaradda Warfaafinta Puntland, Cabdi Xirsi Cali (Qar-jab).
Xildhibaan sheegay in isku-shaandheynta Xukumadda Hirshabeelle lagu qancinayey Baarlamaanka